Shiinaha Warshadda Dhalada Haydarooliga iyo soosaarayaasha | Xinrun
Mabda'a shaqada ee jaakadda hawo-qaadashada ah ayaa ah in bambarku uu kor u qaadayo bistoolada yar. Saliida ku jirta haanta saliida waxaa lagu dhuuqayaa qeybta hoose ee bistoolada yar iyada oo loo sii marinayo tuubada saliida iyo hal-waalka. Marka furka hoos loo cadaadiyo, bistoolada yar waxaa ku xiraya waalka hal-wadlaha ah. Saliida ku jirta qeybta hoose ee bistoolada yar waxaa lagu riixayaa qeybta hoose ee bistoolada weyn iyadoo loo marayo wareegga saliida gudaha iyo waalka hal-dhinac ah, qeybta hoose ee piston-ka waxaa lagu riixayaa kabaalka Xooggu wuu kordhayaa.
Bedka uu ka weyn yahay bistoolada weyn. Cadaadiska saliida ee gacanta lagu soo saaro ayaa lagu tuujiyaa bistoolada weyn. Marka loo eego mabda'a Pascal, saamiga aag ee bastoolado waaweyn iyo kuwo yaryarba wuxuu la mid yahay saamiga cadaadiska. Sidan oo kale, awoodda gacanta ayaa ka kordheysa bambarka illaa bistoolada yar, iyo xoogga ka yimaada bistoolada yar ilaa kan weyn ee bistoolada ah. Markaad shaqeyneyso, kaliya gadaal iyo gadaal u soo jiido gacanta.
Waxay ka dhigeysaa bamka saliidda gacanta si joogto ah saliidda ku cadaadi dhululubo saliidda. Sababtoo ah cadaadiska saliida ee sii kordhaya ee saliida saliida, waxay ku qasbeysaa bistoolada iyo culeyska ka sareeya bistoolada inay kor u wada socdaan. Fur waalka saliida soo celiya, saliida cadaadiska sare ee saliida saliida ayaa dib ugu laaban doonta qolka keydka saliida, sidaa darteed culeyska iyo bistoolada way isla dhici doonaan.
Jack Haydarooliga waa nooc ka mid ah aaladaha adeegsada mabda'a tuubbada si kor loogu qaado qalabka. Waxaa loo kala qaybin karaa laba qaybood: mid waa jaakad dhalo ah oo isku dhafan, tan kalena waa jaakad hawo-hidde ah Naqshadeynta isku dhafan ee jaakada dhalada ah ee isku dhafan ayaa loo qaybiyaa jaakada hawo-qaadashada iyo jaakada lagu xiro iyadoo la raacayo mabda'a wadista, kaas oo lagu xakameeyo cadaadiska gacanta ama birta cadaadiska ruxa.
Jaakada Haydarooliga waxaa si weyn loogu adeegsadaa injineernimada dhismaha, dhismaha markabka, metallurgy, macdanta, shidaalka, injineernimada tareenka, kacsanaanta buundada, warshad, bakhaar, wharf, miisaanka xargaha, taayirka gawaarida iyo bedelka wadada cagafta, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa rakibida keel ama alxanka .
Hore: Saldhigga Haydarooliga
Xiga: Bastoolad Haydarooliga ah
Jirka korontada ku shaqeeya
Haydarooliga dhululubada Jack
Jack Haydarooliga Jack
Raadiyaha Haydarooliga Jack Silsilad